कहाँ पढाउनु छोराछोरी !- विचार - कान्तिपुर समाचार
भाद्र ८, २०७६ सम्झना वाग्ले भट्टराई
अधिकांश अभिभावकलाई छोराछोरीको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालय छनोट कठिन परीक्षाजस्तै भएको छ । सहरी क्षेत्रमा विकल्प प्रशस्त हुन्छन् तर खोजेजस्तो विद्यालय भेट्न साह्रै गाह्रो हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा खासै विकल्प हुँदैन । सहरी क्षेत्रमा हरेक टोलमा एकभन्दा बढी नै विद्यालय छन् ।
तर पनि शुल्क र गुणस्तरका आधारमा आम परिवारका केटाकेटीका लागि उपयुक्त विद्यालय पाउन कठिन छ । सहरमा निःशुल्क पढाइ हुने सरकारी विद्यालयदेखि सरकारी उच्च अधिकारीको एक महिनाको तलबभन्दा बढी मासिक शुल्क लिने निजी विद्यालयसम्म छन् । जहाँ पढेका भए पनि साझा श्रमबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुनाले छोराछोरीको लागि गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा अधिकांश अभिभावक भौँतारिरहेका हुन्छन् । शुल्कमा भएको फरकसँगै शिक्षाको गुणस्तर पनि फरक हुने आम मान्यताले विद्यालय छनोट कठिन बनाएको हुन्छ ।
पाँच वर्षअघि मेरो छोरा यूकेजीमा पढ्थ्यो । शिक्षक–अभिभावक छलफल कार्यक्रम थियो । नर्सरी र केजीमा पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावक, शिक्षक र विद्यालयका प्रिन्सिपल सहभागी थियौं । छलफल भने पनि छुट्याइएको समयको झन्डै असी प्रतिशत समय प्रिन्सिपल बोले ।
लगभग ५० मिनेट बोलेका उनले त्यहाँ उपस्थित अभिभावक र तिनका केटाकेटीलाई सम्वोधन गरी एक शब्द पनि बोलेनन्, बरु एसएलसी (हाल : एसईई) को नतिजामा विद्यालयको विद्यार्थी उत्तीर्ण दर र ‘प्लस टु’ पछि विदेशिएका विद्यार्थीको संख्या दोहोर्‍याइरहे । मैले सुन्न र सुनाउन चाहेको त विद्यालयले मेरो बच्चालाई कसरी सिकाएको छ र उसले कसरी सिकेको छ भन्ने थियो । त्यस्तै, हाम्रा छोराछोरीलाई सिकाउँदाको अनुभव शिक्षिकाहरूले सुनाऊन् भन्ने चाहेकी थिएँ । तर आधा अंग्रेजी र आधा नेपाली मिसिएको प्रिन्सिपलको भाषण एकोहोरो सुनेपछि म निराश भएर फर्किएँ ।
सहरमा नाम चलेका केही विद्यालयका प्रवेश परीक्षामा छोराले नाम निकाल्न नसक्ने, केहीमा शुल्क तिर्न आफूले नसक्ने भएपछि छोरा र आफ्ना लागि उपयुक्त विद्यालय खोज्ने क्रम चलिरह्यो । त्यस्तैमा साथीहरूको सल्लाहमा शिक्षा क्षेत्रमा अनुभवी नेतृत्वले चलाएको एउटा विद्यालय पुगेँ । शिष्ट प्रिन्सिपलले उहाँको विद्यालयले सिकाइमा अवलम्बन गरेको प्रगतिशील सिकाइ (प्रोग्रेसिभ पेडागोजी) बारे धेरै कुरा बताउनुभयो ।
विद्यालय शुल्क आफ्नो आर्थिक हैसियतभन्दा अलि बढी नै लागे पनि शिक्षामा गरिएको खर्च छोराको भविष्यका लागि गरिएको लगानी सम्झिएर त्यही विद्यालयमा छोरा भर्ना गर्‍यौं । पुस्तक र युनिफर्मका लागि विद्यालयले तोकेका पसलहरूको व्यवहार अत्यन्त रुखो थियो । बजार मूल्यको तुलनामा विद्यालय युनिफर्मको मूल्य झन्डै डेढ गुणा महँगो थियो । त्यहाँ बार्गेनिङ र छुटको कुनै गुञ्जायस थिएन । तर पनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि यो स्विकार्नु सायद अनिवार्य थियो ।
विद्यालयले खेलकुद, संगीत, सहभागितामूलक परियोजना कार्यलगायतका अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि जोड दिने रहेछ । प्रगतीशिल सिकाइमा सायद यो विषय पर्छ नै । अभिभावक–शिक्षक छलफल पनि भयो । प्रिन्सिपलले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । छलफलमा अभिभावकका कुराहरू पनि ध्यान दिएर सुनिएको तथा टिपोट गरिएको देखेर म खुसी भएँ । प्रिन्सिपलले हाम्रा सुझावलाई कार्यान्वयन गराउनेमा विश्वस्त तुल्याउनुभयो ।
त्यसको एक साता जतिमा विद्यालयबाट एक जना विषय शिक्षकले फोनमा भन्नुभयो, ‘बाबुले हिजो र आज दुवै दिन किताब नल्याउनुभएकाले मैले पढाउन सकिनँ । अर्को हप्ताबाट किताब राख्न सम्झाउनुहोला ।’
‘अवश्य !’ शिक्षकहरूको जिम्मेवारीपनबाट म खुसी भएँ । विद्यालयमा जाने बेला छोराले किताबहरू झोलामा राखेपछि रुटिनअनुसार छ/छैन भनी सधैँ आफैँ रुजु गर्ने गर्थें । आज केही भूल भएछ कि ? तर म्याडमले लगातार दुई दिन पुस्तक नल्याएको भन्नुभएको थियो । सायद मैले राम्रोसँग रुजु गरिनछु भन्ने लाग्यो ।
साँझ छोरासँग सोधेँ । उसले गुरुआमाले किताब लेऊ भन्नुभएको तर आफूले बिर्सिएको बतायो । ‘ठीकै छ नि त ! विद्यालयले पठाएको रुटिनमा पनि स्पष्ट लेखिएको रहेनछ । अनि आज के पढ्यौ ?’ मैले सोधें । ऊ निरुत्तर रह्यो ।
‘आज गुरुआमाले केही पढाउनुभएन ?’
‘मलाई बाहिर उभ्याउनुभएको थियो ।’ छोरो अँध्यारियो ।
‘अनि हिजो नि ?’
छोराले आँसु चुहाउँदै भन्यो, ‘हिजो पनि बाहिर नै ।’
अभिभावकसँग त्यति राम्रो बोल्ने शिक्षकले बच्चाले एउटा किताब छुटाउँदा लगातार दुई दिन कक्षाबाहिर उभ्याएर सजाय दिएको कुरा मलाई पटक्कै चित्त बुझेन । त्यो पनि विद्यालयले उपलब्ध गराएको रुटिनअनुसार छोराको गल्ती थिएन ।
‘तिमीलाई मात्र बाहिर उभ्याउनुभएको कि अरूलाई पनि ?’ मैले फेरि सोधें ।
ससाना भूलमा पनि कोही न कोही विद्यार्थीलाई बाहिर उभ्याएर सजाय दिने कुरा छोराले बतायो । छोरालाई गाडी चढाउन जाँदा उसका साथीका आमाबुबासँग कहिलेकाहीँ कुराकानी हुन्थ्यो । उनीहरूको पनि त्यस्तै गुनासो रहेछ ।
विद्यार्थीहरूलाई कुनै पनि किसिमको शारीरिक यातना नदिन शिक्षकहरूलाई विद्यालय प्रशासनको निर्देशन रहेछ । त्यसैले उहाँहरू लट्ठी वा मुड्कीको प्रयोगको सट्टा सजायस्वरूप कक्षाबाहिर निकाल्ने गर्नुहुँदो रहेछ । विद्यार्थीलाई सजाय नदिनु भन्नुको अर्थ उनीहरूलाई डर–त्रास नदेखाउनु हो, करकापको सट्टा रुचि जगाएर सिकाउनु भन्नु हो । कक्षाबाहिर निकालेर त उनीहरूको पढाइप्रति रुचि बढ्दैन । कतिपय शिक्षक–शिक्षिकाले त मनोबल कमजोर बनाउने किसिमले गाली गरेको पनि अभिभावकहरूले सुनाए । यस्तो व्यवहारले त विद्यार्थीहरूमा सिकाइप्रति नै वितृष्णा जगाउँछ । यो त भएन प्रगतिशील सिकाइ पद्धति ?
निजी शिक्षण संस्थामा शिक्षक बारम्बार फेरिनुले पनि सिकाइमा नकारात्मक प्रभाव पारेको हुन्छ । अधिकांश निजी शिक्षण संस्थामा पारिश्रमिक तथा सेवाको स्थायित्व तथा वृत्ति विकासको सम्भावना न्यून हुनाले पनि सक्षम जनशक्ति आकर्षित हुन सकेको छैन । अधिकांश निजी विद्यालयमा स्थापित व्यक्तित्वलाई नेतृत्व दिएको विज्ञापन गर्ने तर समूहका अन्य सदस्यको क्षमता वृद्धिमा लगानी नगर्ने प्रवृत्ति छ ।
क्षमता वृद्धिको अवसर नपाएको ‘कामचलाउ’ जनशक्तिको कार्यसम्पादन पनि ‘कामचलाउ’ हुनु स्वाभाविक हो । यसबाट कसरी गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध हुने ? त्यसो त, तुलनात्मक रूपमा राम्रो सेवासुविधा भएका र छनोटको जटिल प्रक्रिया पार गरेर आएका सरकारी शिक्षकहरूले पढाउने विद्यालयको पठनपाठन झनै दयनीय छ ।
प्रकाशित : भाद्र ८, २०७६ ०८:२४
समाज : खुल्दै छन् लुकेका कथा
विगतमा भोगेको यौन दुर्व्यवहारका कारण ॅजेनोफोबिया’ भनिने मानसिक समस्या भएका युवतीहरूको कथा । यस्तो समस्या जसका कारण शारीरिक रूपमा स्वस्थ हुँदाहुँदै पनि यौन जीवन तनावमय हुन पुगेको छ ।
श्रावण २५, २०७६ सम्झना वाग्ले भट्टराई
शारिका (नाम परिवर्तन) ३१, को विवाह भएको ६ वर्ष भयो, एक छोरा छ, चार वर्षको  । श्रीमान्‌को आफ्नै व्यवसाय छ  । उनी काठमाडौंकै एक निजी क्याम्पसमा पढाउँछिन् । मागी बिहे गरेकी उनको श्रीमान्सँगको सम्बन्ध कहिल्यै राम्रो हुन सकेन । सम्बन्ध सुमधुर हुन नसक्नुमा उनी आफ्नै कमजोरी देख्छिन् । उनमा ‘जेनोफोबिया’ को समस्या छ रे ।
यो भनेको यौन सम्बन्धसँग डर लाग्ने एक मनोवैज्ञानिक समस्या हो । डाक्टरहरू उनको समस्यालाई ‘पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर’ पनि भन्दा रहेछन् । विगत दुई वर्षदेखि निरन्तर मनोचिकित्सकको परामर्शमा रहेकी उनले यो कुरा आफ्नै श्रीमान्सँग भने अझै भन्न सकेकी छैनन् । यसको पारिवारिक मूल्य चर्को पर्न सक्छ भन्ने उनलाई डर छ ।
उनको ६ वर्षे वैवाहिक जीवनका कुनै पनि यौन सम्बन्धहरू सुखदायी हुन सकेनन् । जब यौनसम्बन्धको समय हुन्छ, शरीर कक्रक्क पर्न थाल्छ, ऐंठन होलाजस्तो हुन्छ । डरलाग्दा दृश्यहरू मनमा आउँछन् । बेहोस हुँलाहुँलाजस्तो हुन्छ । यौनसम्बन्धको अवधिभरि चुपचाप सहन्छिन् । उनमा यौन सम्बन्धसँगको रुचि रत्तिभर छैन तर केही भन्न सक्दिनन् । यौनसम्बन्धपछि श्रीमान्को अनुहार हेर्दा पनि घृणा लाग्छ, रिस उठ्छ । ऊबाट टाढा भागौं–भागौं लाग्छ, कहिले उसैलाई चिथोर्न मन लाग्छ । निद्रा कम लाग्छ र निद्रामा पनि डरलाग्दा सपनाहरू देख्छिन् । कतिपय बेला आफैंले जन्माएको बच्चा देख्दा पनि नमीठो महसुस हुन्छ । दिक्क लाग्छ । आफैंसँग घृणा लाग्छ, आत्महत्या गरौं–गरौं हुन्छ । चिकित्सकका अनुसार यी सबको कारण ‘जेनोफोबिया’ भनिने मानसिक समस्या रहेछ । र, यस्तो समस्याको मुख्य कारण विगतमा उनले भोग्नुपरेको यौन दुर्व्यवहार हुन सक्ने चिकित्सक बताउँछन् । यसकै कारण शारीरिक रूपमा स्वस्थ युवती हुँदाहुँदै पनि उनको यौन जीवन तनावमय हुन पुगेको छ । तनावमय यौन जीवनले उनको सारा जीवन नै तहसनहस हुन सक्छ भन्नेमा उनी त्रसित छिन् ।
शारिकाको बाँकी कथा
घर काठमाडौं, परिवारमा आमा, बुवा र दुई जना छोराछोरी । बुवा नेपाल प्रहरीमा जागिरे । बुवाको दुर्गममा सरुवा भयो । त्यतिखेर उनी त्यस्तै एघार/बाह्र वर्षकी थिइन्, दाई चौध/पन्ध्रको । प्रहरीको जागिर, बुबाको पोस्टिङ कहिले कता कहिले कता । बसाइको कुनै ठेगाना नहुने । प्रायशः आमा पनि बुवासँगै बस्ने हुँदा दाइलाई होस्टलमा राखेर पढाउनुभयो । मामाघर नजिकै थियो, त्यसैले उनी मामाघरमा नै बसेर पढिन्, काठमाडौंको नाम चलेको एक निजी विद्यालयमा । मामाघरको हजुरबुवाले विशेष माया देखाउँथे । पढे–लेखेका, मोर्डन सोच भएका लाग्थे । होमवर्क गर्न सहयोग गर्नेदेखि, चक्लेटहरू किनिदिने र घुमाउन पनि लाने गर्थे । उनलाई हजुरबुवा मन पर्थ्यो । बिस्तारै उनी तिनै साठी वर्ष हाराहारीका हजुरबुवाबाट यौन दुर्व्यवहारमा परिन् । त्यसो त सुरुमा यो दुर्व्यवहार हो भन्ने पनि थाहा पाइनन् । तर उनको व्यवहार हजुरबुवाले गर्नेजस्तो थिएन र उनलाई मन पर्थेन पनि । आमाबुवालाई भनौंजस्तो लाग्थ्यो तर उनीहरू टाढा थिए । हप्ता/दस दिनमा एक पटक जति फोनमा कुरा हुन्थ्यो ।
अहिलेजस्तो मान्छेको हातहातमा मोबाइल थिएन । आमा–बुवासँग कुरा गर्न कि त घरको ल्यान्डलाइन फोन, कि त तिनै हजुरबुवाको मोबाइल फोनमा भर पर्नुपर्थ्यो । यस्तो कुरा आमाबुवासँग भन्न हुन्छ कि हुँदैनजस्तो लाग्थ्यो । कुनै बेला भनौं नै जस्तो लागे पनि, त्यतिखेर कोही न कोही नजिकै हुन्थ्यो, भन्नै नसकिने । बिस्तारै हजुरबुबाको हर्कतले सारा सीमा पार गर्न थाले । विरोध जनाउँदा कहिले लोभ त कहिले त्रास देखाउनुहुन्थ्यो । कहिले लुगा चक्लेटहरू किनेर फकाउने तथा कहिलेचाहिँ कसैलाई भनिस् भने मारेर गायब पारिदिन्छु भन्नुहुन्थ्यो । मारेर फाले पनि पुलिसको छोरीलाई माओवादीले मारेर फाले भन्छन्, मलाई कसैले शंका पनि गर्दैनन् भन्दै डर देखाउनुहुन्थ्यो । हुँदाहुँदा पछि त आमाबुवालाई फोन गर्न पनि नदिने । काल जमाना ठीक छैन, द्वन्द्वको समय छ, आमा बुवासँग फोनमा कुरा गर्दा सबै राम्रो छ, ठीक छ भनेर कुरा टुंग्याइहाल्न भन्नुहुन्थ्यो । उनका किशोरावस्थाका दिनहरू यस्ता थिए ।
त्यस्तैमा कुनै दिन, उनै हजुरबुवा र अरू दुई जना दिदीसँग सिनेमा हेर्न हलमा गएकी थिइन् । हजुरबुवाले सँगै बसाउन खोजेका थिए तर कसरी कसरी दिदीहरूलाई बीचमा राखेर उनी अर्को छेउमा बस्न सकिन् । यति हुँदा पनि लडाइँ नै जितेजस्तो लागेको थियो त्यतिखेर उनलाई ।
फिल्म हेरिरहँदा, उनको शरीरमा छेवैको सिटमा बसेको केटाको हात सल्बलायो । विरोध जनाउन पनि सकिनन् । केटाले बिस्तारै उसको हात छातीसम्म नै पुर्‍यायो । नराम्रो त लागेको थियो, तर किन किन यो सबै हजुरबुवाले देखे हुन्थ्योजस्तो लाग्यो । यो भएर होइन कि, हजुरबाले देखेर उसले छोड्छ, बरु यो सब देखेर, त्यो पातकी बूढोको मनमा ईर्ष्या वा पीडा केही त हुन्थ्योजस्तो लाग्थ्यो रे । उनको मानसिक अवस्था त्यस्तोसम्म भएको थियो ।
यो क्रम उनको एसएलसी नसकिएसम्म झन्डै चार वर्ष चल्यो । क्याम्पस पढ्न सुरु भएपछि उनी यो समस्याबाट टाढा भइन् । बाबाको पनि काठमाडौंमा नै सरुवा भयो र उनी आमा–बुवासँग आफ्नै घरमा बस्न थालेकी थिइन् । दाइ भने अध्ययनका लागि अमेरिका गैसकेको थियो ।
हजुरबुवाबाट टाढा भए पनि उनलाई समस्याले छोडेको रहेनछ । क्याम्पसमा साथीहरू प्रेमका कुरा गर्थे, रोमान्सका कुरा गर्थे । तर उनलाई यी सब कुरा सुन्दा दिक्क लाग्थ्यो । कुनै पनि केटा मान्छेको नजिक नै पर्न नपरे हुन्थ्योजस्तो लाग्थ्यो । यौनसम्बन्धको कुरा सम्झँदा त, त्यसै दिगमिग लागेर बान्ता होलाजस्तो हुन्थ्यो, अझै हुन्छ ।
जीवनमा कहिल्यै बिहे गर्दिन भन्ने लागेको थियो, तर आमा–बुवाको आग्रह टार्न सकिनन् । त्यही घिनलाग्दो अतीतकै कारण त होला बिहे भैसकेको ६ वर्ष भैसक्दा पनि उनका हरेक यौनसम्बन्ध पीडादायी हुन्छन् । । त्यसो त यौनसँग रुचि बढ्ला भनेर रोमान्टिक किताबहरू पढ्ने, फिल्महरू हेर्ने र कतिपय एडल्ट फिल्महरू पनि हेर्ने गरिन् । तर यी कुनैले पनि केही फरक पारेन । उनले यो विगतबारे अहिलेसम्म श्रीमान्सँग पनि भन्न सकेकी छैनन् । आमासँग एक पटक भनेकी थिइन्, त्यो पनि बिहेपछि मात्र । अब यसको बारे कहिल्यै कुरा नगर, जे भयो भयो, अब कोट्याएर केही हुँदैन भन्नुभयो रे आमाले । अहिले त हजुरबुवा धेरै बूढा भैसकेका छन् तर पनि उनलाई देख्नेबित्तिकै अथाह घृणा लागेर आउँछ रे । अहिले डाक्टरसँगको नियमित परामर्शमा छिन् । डाक्टरले बिस्तारै निको हुन्छ त भन्छन् तर उनलाई हरेक रात आत्महत्या गरौँ–गरौं लाग्छ । कहिले होला र खै निको पनि ? उनी लामो सुस्केरा काढ्छिन् ।
अपराजिता शर्मा (नाम परिवर्तन) अहिले मेडिकल डाक्टर हुन् । उनको कथा उनकै शब्दमा ।
त्यतिखेर आठ कक्षामा पढ्थेँ, उमेर त्यस्तै चौध वर्षजति थियो । त्यो उमेरमा नै झन्डै २७ वर्षको मेरो आफ्नै फुपूको छोरासँग यौनसम्बन्ध भयो । त्यतिखेर ममा यौनबारे उत्सुकता त थियो, तर यौनसम्बन्ध राख्नेबारे कत्ति पनि सोचेकी थिइनँ । कस्तो संयोग थियो भने, दुई दिनपछि उही दाइको बिहे थियो । बिहेको किनमेलमा म पनि गएकी थिएँ । घरमा फर्किएर के–के कुरा गरेर बसिरहेका थियौं, उसले बिहेअघि ‘केही कुरा त थाहा पाउनुपर्छ नि’ भन्यो । मैले खासै बुझ्न पनि सकिनँ, नबुझेकी पनि होइन । हुन्छ पनि भनेकी थिइन, नाइँ पनि भन्न सकिनँ । असमञ्जसमा हामीबीच त्यो सम्बन्ध भयो र त्यतिखेर त्यत्तिकै भयो । बिहे भएको त्यस्तै पन्ध्र दिनपछि ऊ घरमा आयो र उसले फेरि त्यस्तै प्रस्ताव राख्यो । मैले नाइँ भनें । एक त यो राम्रो पनि होइन, अर्को कुरा, अब त तपाईं विवाहित हुनुहुन्छ, भाउजूसँग नै भन्नुस् भनेर मैले स्पष्ट उत्तर दिएँ । उसले साह्रै जिद्दी गर्‍यो । ‘तँ कस्ती केटी होस् भनेर बा, आमालाई भन्दिन्छु’ भन्यो ।
म सानैदेखि पढ्नमा राम्रो थिएँ । सबैले ज्ञानी पनि भन्थे । आमा, बाले पनि खुब माया गर्नुहुन्थ्यो र विश्वास पनि । अब त्यस्तो कुरा उहाँहरूलाई नै भन्दिन्छु भनेपछि, मैले केही बोल्नै सकिनँ । त्यसपछि पनि यसैलाई हतियार बनाएर ऊ पटकपटक मेरोमा आइरह्यो, मैले चुपचाप सहिरहेँ ।
आमा, बुवाले सधैं मलाई डाक्टर बन्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । मलाई पनि त्यही लाग्थ्यो । ऊसँगको त्यस्तो सम्बन्धपछि आफूलाई अलि डिस्टर्व महसुस हुन्थ्यो । मनमा जतिसुकै उकुसमुकुस भए पनि पढाइमा भने खुबै ध्यान दिएँ । एसएलसी राम्रै भयो, ‘प्लस टु’ मा साइन्स पढेँ । नाताको मान्छे ऊ घरमा आइरहन्थ्यो, नआऊ भन्न पनि नमिल्ने । घरको अरू कसैलाई यो कुरा रत्तिभर थाहा थिएन । त्यसो त घरमा आमा, बुवा र म मात्र हो । तर पनि आई.ओ.एम. (इन्स्टिच्युट अभ मेडिसिन) प्रवेश परीक्षाको तयारीका लागि होस्टल बसेर पढ्ने निर्णय गरेँ । आमा, बुवाले अनौठो मान्नुभयो । ‘हामी दुवै दिनभर पसलमा हुन्छौं । घरमा कोही हुँदैन, के डिस्टर्व हुन्छ र तँलाई (?)’ भन्नुभयो । म केले विचलित थिएँ भन्ने कुरा भन्न सकिनँ । तर पनि घरमा बसेपछि पढाइमा ध्यान केन्द्रित नै हुँदैन भनेर होस्टलमा बस्न आमा बुवालाई मनाएँ । खासमा मलाई ऊबाट मुक्ति पाउनु थियो ।
नभन्दै पहिलो वर्ष नै आई.ओ.एम. मा नाम निस्क्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगन्जमा पढ्न थालेँ । अब ऊसँगको भेट पातलो हुन थाल्यो । मैले एमबीबीएस सकेर दुई वर्ष काम पनि गरेँ । यो बीचमा कहिलेकाहीँ हुने भेटहरूमा पनि इज्जतको हतियार देखाएर उसले मलाई लुटिरह्यो । बेइज्जत हुने डरले मैले चुपचाप सहिरहेँ । यी सब झेलेर अब मलाई नेपाल बस्नु थिएन । ‘फर्दर स्टडी’ का लागि अमेरिका जाने तयारी गरेकी थिएँ । स्वास्थ्य केन्द्रमा कामसँगै यूएसएमएलई (युनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेन्सिङ एक्जामिनेसन) को तयारी पनि गरिरहेकी थिएँ । यूएसएमएलईको पहिलो र दोस्रो परीक्षामा ‘स्कोर’ राम्रो आयो । तेस्रो परीक्षाका लागि अमेरिका जानुपर्थ्यो, एप्लाई गरेँ र भिसा पनि आयो । अब भने ऊसँग मुक्ति पाउने भएँ भनेर म ढुक्क भएँ । पाठकहरू, तपाईंलाई लाग्यो होला अब यो कथाको अन्त्य हुनेछ । मलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो । तर अपराजिताले लामो सुस्केरा हालेर भनिन्, ‘सायद कोही मान्छे पीडा भोग्नकै लागि जन्मेका हुन्छन् भने कोही पीडा दिनकै लागि ।’
उनी भन्दै गइन्— जब मेरो यूएस जाने निश्चित भयो, ऊ सोच्नसम्म नसकिने प्रस्ताव लिएर आयो । पढाइमा एसएलसी मात्र पास गरेको, प्लम्बिङको काम गर्ने मेरो आफ्नै फुपूको छोरा ऊ, अमेरिका गएर बिहे गरेर बसौं पो भन्छ । त्यसो त कुनै समुदायमा मामा र फुपूका छोराछोरीबीच बिहे हुने पनि सुनेकी थिएँ । तर हाम्रो सन्दर्भमा यो असम्भव थियो । एक त हाम्रोमा यस्तो सोच्नुलाई पनि पाप मानिन्छ भने, अर्को कुरा ऊ र मबीच जे भएको थियो, त्यो म समाज र परिवारको डरले सहिरहेको थिएँ । कुनै दिन यसको अन्त्य हुन्छ नै भन्ने विश्वासले पनि मलाई भविष्यप्रति भरोसा दिलाएको थियो । ‘यस्तो असम्भव कुरा नगर्नोस् भनेको’ थाहा छ ऊ के भन्छ ? ‘तिमीले नमान्ने हो भने आत्महत्या गर्छु’ भनेर मलाई तर्साउन खोज्छ । ‘जा अहिल्यै गएर मर’ भन्न मन लागेको थियो तर आफूलाई सम्हालेँ ।
त्यसो त मलाई पनि अब उता गएपछि सम्बन्ध छुटिहाल्छ, विगतलाई नमीठो सपना सम्झेर बिर्सन कोसिस गर्छु र नयाँ जीवनको सुरुआत गर्छु लागेको थियो । तर उसको ढिटपना देखेपछि साह्रै दिक्क लाग्यो । सहनुको पनि सीमा हुने रहेछ । म यूएस जाने अघिल्लो दिन ऊलगायतका धेरै नातेदारलाई घरमा खान बोलाएको छ । सबै जना भएको बेला, ऊ कस्तो मान्छे हो र मैले केसम्म भोग्नुपर्‍यो भन्ने सबै सुनाउँछु । त्यसपछि मात्र हलुंगो होला । उनले कथा टुंग्याइन् । र अन्त्यमा, मी–टुको लहरसँगै हाम्रा समाजमा लुकेका धेरै विकृत कथा सतहमा आउन थालेका छन् । यसै क्रममा शारिका र अपराजिता दुवैले उनीहरूको कथा लेखिदिन आग्रह गरे । शारिकाको कुरा सुन्दै गर्दा म साह्रै विक्षिप्त भएँ भने दोस्रो कथा सुन्दै गर्दा, उनको आँट र साहस देखेर यस लेखको प्रयोजनका लागि उनको नाम अपारजिता राख्ने निर्णय लिएँ । यी दुवै त्रासद कथाहरू प्रकाशनका लागि उनीहरूकै अनुमति लिएर लेखेकी हुँ ।
प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ ११:२५